musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Technology » Sweden inova wepamberi-mumhanyi mune inoenderera nendege
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • Kutarisirwa • Sweden Kupwanya Nhau • Technology • ushanyi • kutakura • Trending Now • Akasiyana Nhau
Sweden ine tarisiro yekuda kusave nefossil na2045. Sechikamu chehurongwa, Hurumende yeSweden yakazivisa musi wa11 Gunyana 2020, kuunza giridhe yekudzora gasi inodzivirira mafuta emuchadenga akatengeswa muSweden muna 2021. 0.8% muna 2021, uye zvishoma nezvishoma inowedzera kusvika pa27% muna 2030. Izvi zvinoita kuti Sweden ive mutungamiri asina ganhurwa mukuchengetedza ndege.
“Tinoda vatambi vemberi kuti vatungamire mukufamba nendege kwakaringana. Chinangwa chekuda zvino chakatemwa nehurumende yeSweden muenzaniso vamwe vanofanirwa kutevedzera kuti vatsigire indasitiri yendege mukuzadzisa zvinangwa zvekudzora. Zvinogadzirawo chokwadi chechokwadi chevanogadzira mafuta emuchadenga kuti vaise mari mukuwedzera chigadzirwa, "anodaro Jonathan Wood, Mutevedzeri weMutungamiri, Renewable Aviation Europe kuNeste.
Pakutanga gore rino, Norway yakaunza 0.5% biofuel inosanganisa mvumo. Kuchave nekwaniso inokwana pamusika yekupa huwandu hwakatarisirwa hwemafuta anofamba nendege kuSweden neNorway. Neste iri kutoburitsa huwandu hwekutengesa huwandu hweNeste YANGU Sustainable Aviation Fuel TM, yakanatswa kubva patsva inogadziriswa uye zvisaririra zvigadzirwa. Mune chimiro chayo chakatsetseka uye pamusoro pehupenyu hwehupenyu, iyo mafuta inogona kudzora inosvika ku80% yegreenhouse gasi emissions ichienzaniswa neyefossil jet mafuta.
Neste inochengetedza ndege yekufambisa mafuta gore rega rega pari zvino zviuru zana. NeNeste yekuSingapore yekuwedzeredza nzira iri munzira, uye pamwe nekuwedzera kwekudyara muRotterdam yekuchenesa, Neste ichave nekwanisi yekugadzira mamwe mamirioni 100,000 matani emagetsi anofambisa nendege gore negore na1.5.
Indasitiri yendege yepasirese yakamisikidza zvinangwa zvekudzikisa gasi inokanganisa kupisa kubva mukufambisa kwemhepo, kusanganisira kabhoni-isina kwazvakarerekera kukura kubva muna 2020 nekupfuura, uye kudzikiswa makumi mashanu% kwemambure emuchadenga emhepo kabhoni na50. Aviation inoda mhinduro dzakawanda dzekudzora gasi rinokanganisa kupisa Parizvino, mafuta anofambisa ndege anokwanisa kupa imwe chete nzira inoshanda kune fossil yekumisa ndege.